Nezvedu - Shenzhen Yuxingyuan Chipo Packaging Co., Ltd.
Shenzhen Yuxingyuan Chipo Packaging Co, Ltd. inyanzvi yekudhinda uye kupakata bhizinesi rekubatanidza dhizaini, kudhinda uye post-kugadzirisa. Nyanzvi yekudhinda ese emhando yemabhokisi ekupakira, mabhokisi emavara, mabhokisi emakadhi, makadhi emavara, kushambadza maalbham, ma tag, zvinyorwa, mabhegi emapepa, zvitambi, notepadhi, zvitupa zvekutema, maalbamu emifananidzo, mabhokisi ezvishongo, mabhokisi ezvitoro, mabhokisi ezvipo, uye zvimwe zvakadhindwa. zvishandiso. Iyo kambani inogara ichitora kuvandudzwa kweepamusoro-tekinoroji yazvino yekudhinda bhizinesi sekusimudzira kwayo gwara, inofambirana nenguva, uye inoramba ichingoenderana neyazvino yekudhinda indasitiri ruzivo uye maitiro. Parizvino, kambani ine yepamberi ina-mavara, mashanu-ruvara, matanhatu-mavara Heidelberg neKomori michina yekudhinda, uye kuisirwa kwazvino kweTaiwan yakazara yakazara yakavhurika KBA maprinta anogona kusangana zvizere kugadzirwa kwakasiyana siyana makuru, epakati uye madiki mabhokisi, pamwe neakasiyana epamberi ekutsikirira-kudhinda, kudhinda-mukati, uye post-yekudhinda ekugadzirisa michina kusangana nekuenderera kuri kuwedzera kwevatengi mhando uye sevhisi yekudaidzira.
Kubvira payakagadzwa, kambani iyi yanga ichiomerera kune bhizinesi uzivi hwe "hunyanzvi, hunyanzvi, mhando, sevhisi", michina yemhando yepamusoro yekudhinda, hunyanzvi hwehunyanzvi, uye nekugadzirisa kwakadzika kwerwizi kupa vatengi vane mhando yepamusoro yekudhinda nekupaka zvigadzirwa nemasevhisi. Vese vakagamuchirwa kushanyira uye kutungamira! Kuda kushanda newe kugadzira ramangwana riri nani.
Ramba uchivandudza, kufambira mberi, kuzvikunda pachedu, uye nekukura uye kusimba. Gara uchitenda uye zadzisa zvemagariro mabasa. Edza kuti uwane mhedzisiro uye dzosera vatengi nevashambadzi
Kune vatengi, isu tinotsigira tese kubatsirana uye tinotsvaga zvakajairika budiriro mukushandira pamwe. Kune vanobatana, isu tinotsigira kukwikwidza kukurudzira kubatana pamwe nekuvaka kukunda-kukunda kufunga. Kune vashandi, kurudzira vashandi kuti vakure pamwe chete nekambani. Kuvanhu, reverera kugarisana kugarisana kwemabhizinesi uye nzanga.
Mweya wedu Tsvaga shanduko mumazano, mazano matsva, matanho echokwadi, uye kunatsiridzwa pabasa. Pamberi nenguva, tora mikana, chinja matanho kune mamiriro emuno, uye uvandudze uchichinja.
Bata mamiriro ese, teerera kune zvakadzama, uteedzere kukwana, uye utaridze kugona.
Shenzhen Yuxingyuan Chipo Packaging Co, Ltd. inoteerera kune mutemo we "kuzara kutora chikamu, kuenderera kuvandudza, uye kuzadzikiswa kwechero vimbiso kune vatengi", uye yakagadza yakakwana mhando vimbiso sisitimu uye kukosha-kwakawedzera sevhisi system. Nzwisisika ita bhizinesi remifananidzo maalbum, mapeji eruvara, magazini, maposta, zvigadzirwa zvechigadzirwa, akaisvonaka zvishongo mabhokisi, akajeka mapepa mabhegi, kuputira mabhokisi emara, akaisvonaka zvipo mabhokisi, akajeka mabhuku, zvinyorwa, zvitupa zveteki, nezvimwe. ye "yakatendeka", "kuvimba", "kushingairira", "mhando" uye "kugona", iro zano rehutungamiriri rekutsvaga kugona, mhando yekutanga, zvichibva panheyo, kuvandudza kwazvino, kuvimba nesainzi manejimendi uye zvigadzirwa zvemberi, Superb tekinoroji, yakakwira -quality sevhisi, yakahwina kuzivikanwa kwenhamba huru yevatengi, yakahwina yepamusoro musika mukurumbira uye kuvimbika.
Iyo kambani inogara ichitenda kuti "mhando ndihwo hupenyu hwechigadzirwa, uye kuvimbika ndiro dombo rekona rebhizinesi". Isu tichagadzira mufananidzo wakakwana wekugutsikana kwevatengi neyekutanga-kirasi sevhisi, yekutanga-kirasi manejimendi, uye yekutanga-kirasi mhando, uye nekumisikidza iyo yemhando yekuziva mune yese sevhisi yekudhinda zvigadzirwa, kuhwina kuvimba nekutsigirwa kwevatengi nekuvimbika, uye gadzira ramangwana riri nani nevatengi. Nomwoyo wose kugamuchira vanhu vanobva mumamiriro ese ehupenyu kuti vashanyire uye vashande pamwe!